Stats amin'ny fampisehoana fivarotana 10 ho fantatra | Martech Zone
Statin'ny fampisehoana 10 ho fantatra
Firy isan-jaton'ny olona mpivarotra, amin'ny antsalany, no tsy mahatratra ny quota? Ohatrinona ny salan'isa akaiky? Hatraiza no tsaratsara kokoa ataon'ny mpiasan'ny varotra tsara indrindra raha oharina amin'ny salanisa? Firy isan-jaton'ny mpivarotra no mahatakatra ny fanaintainan'ny mpanjifany? Firy isanjaton'ny solontenan'ny mpivarotra no mahatsapa fa marina ny fantsona?
Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Salesforce Work.com, izany sary avy amin'ny Vondrona TAS manolotra angon-drakitra folo mahaliana momba ny fahombiazan'ny varotra. Na hitanao fa manaitra, na tsy mahagaga mihitsy, ny data dia manazava ny banga amin'ny fahombiazan'ny varotra izay manenika ny orinasam-barotra maro.
Ny mpitantana fivarotana lehibe dia mahalala ny fomba hanaraha-maso marina ny zava-bitan'ny ekipany sy ny fanekena izay mahatonga ny ekipa mpivarotra mazoto sy avo lenta. Ianao ve?
Tags: taha eo ho eotaha akaikyfantsonatabilao fivarotanafitantanana varotrampitantana varotrafahombiazan'ny varotrafantsom-pivarotanaquota varotrampivarotratatitra momba ny varotrastatistikan'ny varotrasalesforcempivarotravondrona tasmiasa.com
Mpahay traikefa: Sehatra Marketing Cross-Channel
CampaignAlyzer: Araho sy tanteraho ny fampielezan-kevitra Analytics